पैट्रिक रबर्ट्स एक नयाँ अंग्रेजी प्रतिभा हो
ब्रिटिश फुटबल व्यापक प्रतिभाशाली खेलाडिहरु बाट भरी छ, तर यी सबै को पहिलो परिमाण को तारा बनने को लागी भाग्य छैन। यसबाहेक, धेरै प्याट्रिक रबर्टहरू जस्ता खेलाडीहरू हेर्छन् - आक्रमणको जवान विगनले सबैको खेलको साथ प्रभाव पार्छ। धेरैले विश्वास गर्छन् कि 3-4 वर्षमा, उनी अंग्रेजी फुटबलको नयाँ तारा हुनेछन्। तर अहिले सम्म, पैट्रिक रबर्ट्स एक किशोर किशोरी हो, जसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न धेरै माध्यम ले जान्छ। तर खेलाडीको कभर पछि के बायाँ छ? उसले के गरे र प्राप्त गर्यो?
प्याट्रिक रबर्ट्स5फरवरी 1 997मा इङ्गल्याण्डमा जन्मिएको थियो, जहाँ उनले प्रारम्भिक उमेरमा फुटबल अकादमी "मोसेले जुनियर" मा भाग लिन थाले। त्यहाँबाट, उनी चाँडै क्लब "विम्बलडन" को अकादमीमा गए, जहाँ उनी 2010 सम्म थिए। जब उनी 13 बर्षको थिए, पैट्रिकले स्केआउटको आँखालाई समात्न थाले, जसले उनलाई प्रसिद्ध क्लब "फुलहम" प्रणालीमा जानको लागि आमन्त्रित गर्यो। स्वाभाविक रूपले, केटाले सहमति गर्यो, र फुलममले नयाँ उज्यालो तारा बनाए।
2014 मा, पैट्रिक 17 ले जब, उनले क्लबसँग एक पेशेवर अनुबंधमा हस्ताक्षर गरे र बाँकी मौसमको लागि केवल दुई खेल खर्च गर्न सफल भयो। त्यस पछि, "फुलहम" च्याम्पियनशिपमा उभियो, जसले युवा खेलाडीलाई आफैले देखाउने मौका दिए। सीजन 14/15 मा, उनले 20 म्याच खेलेका थिए, जसले बलियो क्लबको स्काउट्सलाई आकर्षित गर्न भन्दा राम्रो साबित गर्यो। अनि त्यसपछि चमत्कार भयो - 2015 को गर्मीमा, क्लबले एक पागल प्रस्ताव प्राप्त गर्यो। इङ्गल्याण्डका सबै भन्दा बलियो क्लबहरू, "मैनचेस्टर सिटी" एक 18 वर्षीय खेलाडीको लागि 15 मिलियन यूरो दिनको लागि तयार थियो। स्वाभाविक रूप देखि, "फुलहम" मा सहमत भए, र पैट्रिक रबर्ट्स उनको खुशी मा नहीं आ सके - त्यो "मैनचेस्टर सिटी" को एक खेलाडी बन्यो!
छ महिना नयाँ क्लबमा
तर, यो सम्भव छैन कि कसैले कुनै तथ्यको निर्माण गरिरहेको थियो भन्ने तथ्य यो तथ्य हो कि युवा खेलाडी तुरुन्तै क्लबको मुख्य भागमा तोड्न र स्थायी रूपमा त्यहाँ गेमिंग अभ्यास सुरु गर्न सुरु गर्नेछ। तर तथ्य यह है कि वर्ष पैट्रिक रबर्ट्स को पहिलो छमा, जो एक फुटबलर को रूप मा इंग्लैंड को शीर्ष जवान प्रतिभा को एक नै मानिन्छ, केवल तीन खेल खेले, कुनै को खुश नहीं सक्छ। त्यसकारण, सर्दमा, सबैभन्दा उचित निर्णय लिइयो - युवा प्रतिभा भाडामा पठाइनेछ। स्कटिश एफसी "केल्टिक" लाई स्वीकार गर्न सहमत भयो।
केल्टिकमा भाडा लिनुहोस्
पट्टे सम्झौता एक वर्ष र आधाको लागि डिजाइन गरिएको छ, त्यो हो, पैट्रिक रबर्ट्स 2017 को गर्मी सम्म स्कस्टिश क्लबको लागि खेल्नेछ। सीजनको दोस्रो भाग 15/16 ले अन्ततः खेलाडीलाई आवश्यक आवश्यक अभ्यास गर्न अनुमति दिईयो - उनले 13 खेल खेले, जसमा उनले6गोल गरे।
अब "केल्टिक" को प्रबंधन को आशा छ कि रबर्ट्स ले पूरी सीजन एक नै मा, या शायद पनि अधिक प्रभावशाली स्तर मा खर्च हुनेछ। तर अब सम्म परिणाम नतिजा जस्तो छैन जस्तो कि अघिल्लो सिजनको अन्त्यमा थियो - 19वर्षीया खेलाडीले विभिन्न टूर्नामेंटको क्षेत्रफल 11 गुणा प्रवेश गर्यो, तर केवल एक गोल बनाए र दुई सहयोग बनाए। तर यो केवल शुरुवात हो - यो अत्यन्तै सम्भव छ कि नजिकको भविष्यमा पैट्रिकले आफ्नो खेल फेरि फेला पार्नेछ र सेल्टिकको लागि ठूलो फुटबल देखाउनेछ।
संभावना यो कुरामा उसले राम्रो लागि "केल्टिक" मा रहनेछ, धेरै सानो छ, किनभने "मैनचेस्टर सिटी" मात्र नयाँ प्रतिभा संग प्रसन्न हुनेछ। तर अझै चाँडै नगर्नुहोस् - यो केवल युवा खेलाडी कसरी विकास गर्छ, र आशा गर्न को लागी रहन्छ कि अर्को तारा फुटबल को क्षितिजमा देखा पर्नेछ।
आज सम्म, पैट्रिक रबर्ट्स 19वर्षको उमेरमा छ, र उनीहरुलाई कहिल्यै राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा बोलाइएको छैन। अहिलेसम्म, उनी इंग्ल्यान्ड युनियन टोलीका लागि बोल्दै जान्छन्। भर्खरै, उनी नयाँ उमेर कोटीमा 20 वर्षसम्म सारियो। त्यहाँ उनले पहिले नै ब्राजिल, होल्यान्ड र जर्मनीको युगको उमेरको उमेरमा तीन अनुकूल म्याच खेलेका छन। पहिलो म्याच एक ड्रामा समाप्त भयो, र अन्य दुई विजेताहरू, जबकि डेब्रिडका साथ रोबर्ट्सले खेलमा गोल गरे।
सेबस्टियन केल: जीवनी, मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क, फुटबल खेलाडी प्रोफाइल
Kirov मा Waterpark: ठेगाना, समीक्षा, फोटो
बच्चा मा स्टमटाइटिस को लक्षण। कारणहरू, उपचार, रोकथाम
किन लोड छैन 'संपर्क'
Calvados। स्याउ वोदका लागि नुस्खा
कोठा मा हावा को माप। हावा मापदण्डहरू मापन गर्न प्रालंब
आर्थिक नीति: लाभ र यसको कार्यान्वयनको बेफाइदा
क्लिभल्याण्ड टोर्सो रत्नाकर: जीवनी, रोचक तथ्य
तपाईंको फिर्ता कसरी मालिश र कुनै हानि गर्न
को भुँडी को बायाँ तर्फ मा संबंधी बृहदांत्रशोथ। यो के हुन सक्छ?